စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၈) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on February 11, 2014 at 12:28 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
စာပိုဒ်ဖတ်နေစဉ်အတွင်း (While you read)
Reading exam မှာ စာဖတ်ပုံ ဖတ်နည်းနဲ့ မဂ္ဂင်း၊ web page (သို့) စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ဖတ်ပုံဖတ်နည်းဟာ လွန်စွာမှ ကွဲပြားပါတယ်။ ယခုဖော်ပြမဲ့အချက်တွေသည် စာမေးပွဲက စာပိုဒ်တွေကို မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ ဖတ်နိုင်အောင်၊ အတတ်နိုင်ဆုံးအမှတ်ကောင်းကောင်းရနိုင်အောင် အထောက်အပံ့ပေးမဲ့ အကြံပြုချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
စာပိုဒ်ကို ဖတ်ပုံဖတ်နည်း (How to read the text)
စာပိုဒ်ကို ဖတ်ပုံဖတ်နည်းသည် ၄င်းစာပိုဒ်ကို သင်သည် ပထမအကြိမ်၊ ဒုတိယအကြိမ်(သို့) တတိယအကြိမ် ဖတ်နေတာလားဆိုတဲ့ အချက်ပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။
စာပိုဒ်ကို ပထမအကြိမ် စဖတ်တဲ့အခါ အကြမ်းဖျဉ်း သဘောပေါက်အောင် လျင်လျင်မြန်မြန်ဖတ်ပါ။
သင့်မျက်လုံးက စာပိုဒ်အပေါ် အစမှအဆုံး ရွေ့လျားသွားပါစေ။
စာပိုဒ်ထဲက အကြောင်းအရာဟာ ဘာလဲဆိုတာ သိရအောင် နိဒါန်း (introduction)ကို လျင်မြန်စွာ သော့ဖတ်လိုက်ပါ။
ပထမအကြိမ်စာပိုဒ်ကို ဖတ်တဲ့အခါ တိကျတဲ့အချက်အလက်တွေ သိရှိအောင် မြန်မြန်လေး ကပျာကယာ (scan)ဖတ်လိုက်ပါ။
သင့်မျက်လုံးတွေဟာ စာပိုဒ်နေရာအနှံ့ကို လျင်လျင်မြန်မြန် ရွေ့လျားရပါမယ်။ ဘယ်မှညာသို့ အထက်မှ အောက်သို့။
အမည်တွေ၊ နေရာတွေ၊ ကိန်းဂဏန်းတွေ (သို့) ရက်စွဲတွေကို ရှာရန်အတွက် ကပျာကယာဖတ်(Scan) လိုက်ပါ။
စာပိုဒ်ကို ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေ၊ ရက်စွဲတွေ၊ အမည်တွေ အစရှိတာတို့ကို ၀ိုင်း(circle) လိုက်ပါ။
အသေးစိတ်၊ တိကျတဲ့အချက်အလက်အတွက် ဖိတ်ခြင်း (Reading for detail / specific information)
ဒုတိယအကြိမ် စာပိုဒ်ကို ဖတ်တဲ့အခါကျတော့မှ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေ၊ တိကျတဲ့ အချက်အလက် တွေကို ရှာရန်အတွက် ဖတ်ရပါမယ်။
ဖြေးဖြးနှင့် သေသေချာချာ ဖတ်ပါ။
စာပိုဒ်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို ထပ်ခါ၊ ထပ်ခါ ပြန်ဖတ်ပါ။
ခက်ခဲသော မေးခွန်းများ (Difficult questions)
စာမေးပွဲတိုင်းမှာ ခက်ခဲတဲ့ မေးခွန်းတစ်ပုဒ်၊ နှစ်ပုဒ်တော့ ပါစမြဲပါ။ ဒါကြောင့် နားမလည်သော (သို့) အဖြေရှာမတွေ့သော မေးခွန်းမျိုးကို ကြုံတွေ့ပါက ထိတ်လန့်မသွားပါနှင့်။
သင် မဖြေနိုင်တဲ့ မေးခွန်းတစ်ပုဒ်ပါလာပါသလား? ချန်ခဲ့လိုက်ပါ။ အားလုံးဖြေပြီးမှ တစ်ကျော့ပြန်လာပါ။
မဖြနိုင်တဲ့ မေးခွန်းခက်ခက်တွေအတွက် အချိန်တွေအများကြီး မဖြုန်းပါနှင့်။
အဖြေရှာပါ။ (Find the answer)
Reading exam တွေရဲ့ အဓိက ရည်မှန်းချက်ကတော့ အဖြေရှာဖို့ပါပဲ။ အောက်ပါ အကြံပြုချက်တွေရဲ့ အကူအညီဖြင့် အဖြေများကို ရှာကြည့်ပါ။
အများအားဖြင့်တော့ မေးခွန်းဆိုတာကတော့ စာပိုဒ်ထဲမှာပါတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို ရှေ့နောက် အစီအစဉ်အတိုင်း စီစဉ်ထားတဲ့ အချက်အလက်တွေကို ရည်ညွှန်းခြင်း၊ မေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ပထမမေးခွန်းသည် စာပိုဒ်ရဲ့ အစမှာပါတဲ့ အချက်ကို ညွှန်းတာဖြစ်သကဲ့သို့ ဒုတိယမေးခွန်းသည် စာပိုဒ်ရဲ့ နောက်တစ်ပိုင်းက အချက်အလက်ကို ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မေးခွန်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ အပိုဒ်ကို စာပိုဒ်ထဲမှာ ရှာကြည့်ပါ။ မေးခွန်းကို ပြန်ဖတ်ပြီးနောက် စာပိုဒ်ကို တစ်ကျော့ပြန်ကြည့်ပြီး အဖြေကို ရှာပါ။
အဖြေကို တိတိကျကျ ရှာဖွေနိုင်ရန်နှင့် အာရုံစူးစိုက်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့ပေးတဲ့ စာပိုဒ်ထဲက စာသားတွေကို မျဉ်းသားပါ (သို့) highlight လုပ်ပါ။
စာပိုဒ်ထဲမှာ မလည်တဲ့ စကားလုံးတွေပါနေတာကတော့ ထုံးစံပါပဲ။ အရေးကြီးတာက ဒီနားမလည်တဲ့ စာလုံးတွေကို ဘယ်လို ကွေ့ပတ်ပြီးဖတ်(read around)ရမလဲဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ။ အဲဒီလိုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် ဖော်ပြပါ အကြံပြုချက်တွေက အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မည်။
စကားစပ်ကို အသုံးပြုပြီး အဓိပ္ပါယ်ကို နားလည်အောင် လုပ်ပါ။ ထိုမသိတဲ့ စကားလုံးပါနေတဲ့ဝါကျကို အစအဆုံးပြီး ၄င်း၏ ရှေ့နောက်၌ရှိသော ၀ါကျများကိုလည်းဖတ်ပါ။
စကားလုံးရဲ့ အမျိုးအစားဟာ ဘာလဲ? နာမ်(noun)လား? ကြိယာ (verb)လား၊ နာမ၀ိသေသန(adjective) လား? ကြိယာထောက် (adverb)လား။?
အပြုသဘောဆောင်တဲ့ (positive) စကားလုံးလား (သို့) ငြင်းဆိုတဲ့ သဘော(negative)ပါတဲ့ စကားလုံး လား?
စာပိုဒ်ထဲက ထိုစကားလုံးနဲ့ ကြောင်းတူ သံကွဲတဲ့ စကားလုံး (Synonyms) တွေကို ရှာကြည်ပါ။ စာပိုဒ်ကောင်းတစ်ပုဒ်မှာ စကားလုံးတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်သုံးမဲ့အစား ကြောင်းတူသံကွဲ စကားလုံးများကို အသုံးပြုတတ်တယ်၊ သင်မသိတဲ့ စကားလုံးဟာ စာပိုဒ်ထဲမှာပါတဲ့ တခြားစကားလုံး တစ်လုံးရဲ့ synonym ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
စာပိုဒ်ထဲမှာပါတဲ့ အကြောင်းအရာအကြောင်းကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင်သိပြီးသား စကားလုံးတွေထဲမှာ ထို အကြောင်းအရာနှင့်ဆက်နွယ်နေတဲ့ စကားလုံးတွေပါနေပါသလား?
စာပိုဒ်ထဲက သင်မသိတဲ့ ဝေါဟာရသည် သင်သိပြီးသား စကားလုံးတစ်ခုခုနဲ့ တူနေပါသလား?
သင့်ဘာသာစကားထဲက စကားလုံးတစ်ခုခုနဲ့ ရောဆင်တူနေပါသလား?
စာဖတ်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများ (Reading tasks)
Reading exam မှ ဖြေဆိုရမဲ့ မေးခွန်းပုံစံတွေကို ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် စာမေးပွဲဖြေဆိုတဲ့အခါ အံ့သြစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့။ ဒီကဏ္ဍမှာ ဖော်ပြမဲ့ အကြံပြုချက်တွေကတော့ မေးခွန်းပုံစံအမျိုးမျိုးကို ဖြေဆိုနိုင်ရန် အထောက်အပံ့ပေးပါလိမ့်မည်။
စာပိုဒ်နှင့်ခေါင်းစဉ်ကို တွဲပေးခြင်း (Matching the headings with the paragraphs)
ဒီလိုမေးခွန်းပုံစံကို ကောင်းကောင်းဖြေနိုင်ဖို့ဆိုရင် စာပိုဒ်တစ်ပိုဒ်ချင်းစီရဲ့ အကျဉ်းချုပ်(gist) သို့မဟုတ် အဓိက ရည်ရွယ်ချက်တွေကို နားလည်ရပါမယ်။ အောက်ပါအချက်တွေကတော့ ဒီလို မေးခွန်းပုံစံကို ကောင်းကြောင်း ဖြေနိုင်ဖို့ ပေးထားတဲ့ အကြံပြုချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဦးစွာ ခေါင်းစဉ်အားလုံးကို ဖတ်ပါ။
ထို့နောက် စာပိုဒ်တွေကို ဖတ်ပါ။ ပြီးလျှင် သင့်စိတ်ထဲမှာ သေချာနေပြီဖြစ်တဲ့ စာပိုဒ်နှင့် ခေါင်းစဉ်ကို တွဲလိုက်ပါ။
မသေချာတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ချန်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်ခုကို ဆက်သွားပါ။ မသေချာတဲ့အတွဲတွေကို နောက်ဆုံးကျ ဖယ်ရှားသော နည်းဖြင့် တွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အပိုပေးထားတဲ့ ရွေးစရာတွေ (options)ကို သတိထားပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ စာပိုဒ်(၄)ခု ပေးထားပေမဲ့ ခေါင်းစဉ်ကျတော့ (၆)ခု ပေးထားတတ်ပါတယ်။ ဒါဆို ရွေးစရာ (၂)ခုက ပိုနေတာပေါ့။
မှား၊ မှန်ရွေးခြင်း (True or false)
မှား၊ မှန်ရွေးရတဲ့ မေးခွန်းတွေဟာ နည်းနည်းတော့ ခက်ခဲတတ်ပေမဲ့ အောက်ပါ အကြံပြုချက်များကို အသုံးပြုပါက အလွယ်တကူ ဖြေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းထဲက ၀ါကျတွေကို သေသေချာချာဖတ်ပါ။ ပေးထားတဲ့စာပိုဒ်ကို မဖတ်ခင် သင်သိထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို အသုံးပြုပြီး ၀ါကျတွေဟာ မှန်လား၊ မှားလားဆိုတာကို စဉ်းစားပါ။ သင် စဉ်းစားထားတာသည် ဟုတ်မဟုတ် သေချာအောင် စာပိုဒ်ကို ဖတ်ပါ။
အဖြေအတွက် အချက်အလက်တွေပါသည့် စာပိုဒ်၏ အပိုင်းကို မျဉ်းသားပါ။ ၀ါကျ မှန်၊ မမှန်ကို ဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ သက်သေတွေကို စာပိုဒ်ထဲမှ ရှာယူပါ။ မှား၊ မှန်မေးခွန်းအားလုံးကို ဖြေပါ။ တစ်ခုမှ မဖြေဘဲ မထားခဲ့ပါနှင့်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင့်အဖြေဟာ မှန်နိုင်ဖို့ ၅၀% အခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်။
တစ်ခါတရံကျတော့ မှန်၊ မှား မဖော်ပြထားပါ (doesn’t say)ဆိုပြီး ရွေးစရာသုံးမျိုးပေးထားတတ်ပါတယ်။ “မဖော်ပြထားပါ” ဆိုတဲ့ ရွေးစရာက အများအားဖြင့် ပိုပြီး ခက်ခဲပေမဲ့လည်း ပါဝင်တဲ့ အကြိမ်ကတော့ နည်းပါတယ်။
စာပိုဒျဖတျနစေဉျအတှငျး (While you read)
Reading exam မှာ စာဖတျပုံ ဖတျနညျးနဲ့ မဂ်ဂငျး၊ web page (သို့) စာအုပျတဈအုပျကို ဖတျပုံဖတျနညျးဟာ လှနျစှာမှ ကှဲပွားပါတယျ။ ယခုဖျောပွမဲ့အခကျြတှသေညျ စာမေးပှဲက စာပိုဒျတှကေို မှနျကနျတဲ့နညျးနဲ့ ဖတျနိုငျအောငျ၊ အတတျနိုငျဆုံးအမှတျကောငျးကောငျးရနိုငျအောငျ အထောကျအပံ့ပေးမဲ့ အကွံပွုခကျြတှဖွေဈပါတယျ။
စာပိုဒျကို ဖတျပုံဖတျနညျး (How to read the text)
စာပိုဒျကို ဖတျပုံဖတျနညျးသညျ ၎င်းငျးစာပိုဒျကို သငျသညျ ပထမအကွိမျ၊ ဒုတိယအကွိမျ(သို့) တတိယအကွိမျ ဖတျနတောလားဆိုတဲ့ အခကျြပျေါမှာ မူတညျနပေါတယျ။ အောကျဖျောပွပါ နညျးလမျးတှကေို အသုံးပွုကွညျ့ပါ။
စာပိုဒျကို ပထမအကွိမျ စဖတျတဲ့အခါ အကွမျးဖဉျြး သဘောပေါကျအောငျ လငျြလငျြမွနျမွနျဖတျပါ။
သငျ့မကျြလုံးက စာပိုဒျအပျေါ အစမှအဆုံး ရှလြေ့ားသှားပါစေ။
စာပိုဒျထဲက အကွောငျးအရာဟာ ဘာလဲဆိုတာ သိရအောငျ နိဒါနျး (introduction)ကို လငျြမွနျစှာ သော့ဖတျလိုကျပါ။
ပထမအကွိမျစာပိုဒျကို ဖတျတဲ့အခါ တိကတြဲ့အခကျြအလကျတှေ သိရှိအောငျ မွနျမွနျလေး ကပြာကယာ (scan)ဖတျလိုကျပါ။
သငျ့မကျြလုံးတှဟော စာပိုဒျနရောအနှံ့ကို လငျြလငျြမွနျမွနျ ရှလြေ့ားရပါမယျ။ ဘယျမှညာသို့ အထကျမှ အောကျသို့။
အမညျတှေ၊ နရောတှေ၊ ကိနျးဂဏနျးတှေ (သို့) ရကျစှဲတှကေို ရှာရနျအတှကျ ကပြာကယာဖတျ(Scan) လိုကျပါ။
စာပိုဒျကို ဖတျရငျးနဲ့ ကိနျးဂဏနျးတှေ၊ ရကျစှဲတှေ၊ အမညျတှေ အစရှိတာတို့ကို ဝိုငျး(circle) လိုကျပါ။
အသေးစိတျ၊ တိကတြဲ့အခကျြအလကျအတှကျ ဖိတျခွငျး (Reading for detail / specific information)
ဒုတိယအကွိမျ စာပိုဒျကို ဖတျတဲ့အခါကတြော့မှ အသေးစိတျအခကျြအလကျတှေ၊ တိကတြဲ့ အခကျြအလကျ တှကေို ရှာရနျအတှကျ ဖတျရပါမယျ။
ဖွေးဖွးနှငျ့ သသေခြောခြာ ဖတျပါ။
စာပိုဒျရဲ့ အစိတျအပိုငျးတှကေို ထပျခါ၊ ထပျခါ ပွနျဖတျပါ။
ခကျခဲသော မေးခှနျးမြား (Difficult questions)
စာမေးပှဲတိုငျးမှာ ခကျခဲတဲ့ မေးခှနျးတဈပုဒျ၊ နှဈပုဒျတော့ ပါစမွဲပါ။ ဒါကွောငျ့ နားမလညျသော (သို့) အဖွရှောမတှသေ့ော မေးခှနျးမြိုးကို ကွုံတှပေ့ါက ထိတျလနျ့မသှားပါနှငျ့။
သငျ မဖွနေိုငျတဲ့ မေးခှနျးတဈပုဒျပါလာပါသလား? ခနျြခဲ့လိုကျပါ။ အားလုံးဖွပွေီးမှ တဈကြော့ပွနျလာပါ။
မဖွနိုငျတဲ့ မေးခှနျးခကျခကျတှအေတှကျ အခြိနျတှအေမြားကွီး မဖွုနျးပါနှငျ့။
အဖွရှောပါ။ (Find the answer)
Reading exam တှရေဲ့ အဓိက ရညျမှနျးခကျြကတော့ အဖွရှောဖို့ပါပဲ။ အောကျပါ အကွံပွုခကျြတှရေဲ့ အကူအညီဖွငျ့ အဖွမြေားကို ရှာကွညျ့ပါ။
အမြားအားဖွငျ့တော့ မေးခှနျးဆိုတာကတော့ စာပိုဒျထဲမှာပါတဲ့ ဖွဈရပျတှကေို ရှနေ့ောကျ အစီအစဉျအတိုငျး စီစဉျထားတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို ရညျညှနျးခွငျး၊ မေးခွငျးပဲဖွဈပါတယျ။ ဥပမာ ပထမမေးခှနျးသညျ စာပိုဒျရဲ့ အစမှာပါတဲ့ အခကျြကို ညှနျးတာဖွဈသကဲ့သို့ ဒုတိယမေးခှနျးသညျ စာပိုဒျရဲ့ နောကျတဈပိုငျးက အခကျြအလကျကို ညှနျးခွငျးဖွဈပါတယျ။
မေးခှနျးနှငျ့ဆကျစပျမှုရှိတဲ့ အပိုဒျကို စာပိုဒျထဲမှာ ရှာကွညျ့ပါ။ မေးခှနျးကို ပွနျဖတျပွီးနောကျ စာပိုဒျကို တဈကြော့ပွနျကွညျ့ပွီး အဖွကေို ရှာပါ။
အဖွကေို တိတိကကြ ရှာဖှနေိုငျရနျနှငျ့ အာရုံစူးစိုကျရနျအတှကျ အထောကျအပံ့ပေးတဲ့ စာပိုဒျထဲက စာသားတှကေို မဉျြးသားပါ (သို့) highlight လုပျပါ။
စာပိုဒျထဲမှာ မလညျတဲ့ စကားလုံးတှပေါနတောကတော့ ထုံးစံပါပဲ။ အရေးကွီးတာက ဒီနားမလညျတဲ့ စာလုံးတှကေို ဘယျလို ကှပေ့တျပွီးဖတျ(read around)ရမလဲဆိုတဲ့ အခကျြပါပဲ။ အဲဒီလိုလုပျနိုငျရနျ အတှကျ ဖျောပွပါ အကွံပွုခကျြတှကေ အထောကျအကူပွုပါလိမျ့မညျ။
စကားစပျကို အသုံးပွုပွီး အဓိပ်ပါယျကို နားလညျအောငျ လုပျပါ။ ထိုမသိတဲ့ စကားလုံးပါနတေဲ့ဝါကကြို အစအဆုံးပွီး ၎င်းငျး၏ ရှနေ့ောကျ၌ရှိသော ဝါကမြားကိုလညျးဖတျပါ။
စကားလုံးရဲ့ အမြိုးအစားဟာ ဘာလဲ? နာမျ(noun)လား? ကွိယာ (verb)လား၊ နာမဝိသသေန(adjective) လား? ကွိယာထောကျ (adverb)လား။?
အပွုသဘောဆောငျတဲ့ (positive) စကားလုံးလား (သို့) ငွငျးဆိုတဲ့ သဘော(negative)ပါတဲ့ စကားလုံး လား?
စာပိုဒျထဲက ထိုစကားလုံးနဲ့ ကွောငျးတူ သံကှဲတဲ့ စကားလုံး (Synonyms) တှကေို ရှာကွညျပါ။ စာပိုဒျကောငျးတဈပုဒျမှာ စကားလုံးတဈမြိုးတညျးကိုပဲ ထပျခါထပျခါ ပွနျသုံးမဲ့အစား ကွောငျးတူသံကှဲ စကားလုံးမြားကို အသုံးပွုတတျတယျ၊ သငျမသိတဲ့ စကားလုံးဟာ စာပိုဒျထဲမှာပါတဲ့ တခွားစကားလုံး တဈလုံးရဲ့ synonym ဖွဈကောငျးဖွဈနနေိုငျပါတယျ။
စာပိုဒျထဲမှာပါတဲ့ အကွောငျးအရာအကွောငျးကို စဉျးစားကွညျ့ပါ။ သငျသိပွီးသား စကားလုံးတှထေဲမှာ ထို အကွောငျးအရာနှငျ့ဆကျနှယျနတေဲ့ စကားလုံးတှပေါနပေါသလား?
စာပိုဒျထဲက သငျမသိတဲ့ ဝေါဟာရသညျ သငျသိပွီးသား စကားလုံးတဈခုခုနဲ့ တူနပေါသလား?
သငျ့ဘာသာစကားထဲက စကားလုံးတဈခုခုနဲ့ ရောဆငျတူနပေါသလား?
စာဖတျခွငျးနှငျ့ဆိုငျသော လုပျငနျးမြား (Reading tasks)
Reading exam မှ ဖွဆေိုရမဲ့ မေးခှနျးပုံစံတှကေို ရငျးနှီးပွီးသားဖွဈနမေယျဆိုရငျ စာမေးပှဲဖွဆေိုတဲ့အခါ အံ့သွစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့။ ဒီကဏ်ဍမှာ ဖျောပွမဲ့ အကွံပွုခကျြတှကေတော့ မေးခှနျးပုံစံအမြိုးမြိုးကို ဖွဆေိုနိုငျရနျ အထောကျအပံ့ပေးပါလိမျ့မညျ။
စာပိုဒျနှငျ့ခေါငျးစဉျကို တှဲပေးခွငျး (Matching the headings with the paragraphs)
ဒီလိုမေးခှနျးပုံစံကို ကောငျးကောငျးဖွနေိုငျဖို့ဆိုရငျ စာပိုဒျတဈပိုဒျခငျြးစီရဲ့ အကဉျြးခြုပျ(gist) သို့မဟုတျ အဓိက ရညျရှယျခကျြတှကေို နားလညျရပါမယျ။ အောကျပါအခကျြတှကေတော့ ဒီလို မေးခှနျးပုံစံကို ကောငျးကွောငျး ဖွနေိုငျဖို့ ပေးထားတဲ့ အကွံပွုခကျြတှဖွေဈပါတယျ။
ဦးစှာ ခေါငျးစဉျအားလုံးကို ဖတျပါ။
ထို့နောကျ စာပိုဒျတှကေို ဖတျပါ။ ပွီးလြှငျ သငျ့စိတျထဲမှာ သခြောနပွေီဖွဈတဲ့ စာပိုဒျနှငျ့ ခေါငျးစဉျကို တှဲလိုကျပါ။
မသခြောတဲ့ ခေါငျးစဉျကို ခနျြခဲ့ပွီး နောကျတဈခုကို ဆကျသှားပါ။ မသခြောတဲ့အတှဲတှကေို နောကျဆုံးကြ ဖယျရှားသော နညျးဖွငျ့ တှဲနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
အပိုပေးထားတဲ့ ရှေးစရာတှေ (options)ကို သတိထားပါ။ ဆိုလိုတာကတော့ စာပိုဒျ(၄)ခု ပေးထားပမေဲ့ ခေါငျးစဉျကတြော့ (၆)ခု ပေးထားတတျပါတယျ။ ဒါဆို ရှေးစရာ (၂)ခုက ပိုနတောပေါ့။
မှား၊ မှနျရှေးခွငျး (True or false)
မှား၊ မှနျရှေးရတဲ့ မေးခှနျးတှဟော နညျးနညျးတော့ ခကျခဲတတျပမေဲ့ အောကျပါ အကွံပွုခကျြမြားကို အသုံးပွုပါက အလှယျတကူ ဖွနေိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
လကေ့ငျြ့ခနျးထဲက ဝါကတြှကေို သသေခြောခြာဖတျပါ။ ပေးထားတဲ့စာပိုဒျကို မဖတျခငျ သငျသိထားတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို အသုံးပွုပွီး ဝါကတြှဟော မှနျလား၊ မှားလားဆိုတာကို စဉျးစားပါ။ သငျ စဉျးစားထားတာသညျ ဟုတျမဟုတျ သခြောအောငျ စာပိုဒျကို ဖတျပါ။
အဖွအေတှကျ အခကျြအလကျတှပေါသညျ့ စာပိုဒျ၏ အပိုငျးကို မဉျြးသားပါ။ ဝါကြ မှနျ၊ မမှနျကို ဆုံးဖွတျပေးမဲ့ သကျသတှေကေို စာပိုဒျထဲမှ ရှာယူပါ။ မှား၊ မှနျမေးခှနျးအားလုံးကို ဖွပေါ။ တဈခုမှ မဖွဘေဲ မထားခဲ့ပါနှငျ့။ ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ သငျ့အဖွဟော မှနျနိုငျဖို့ ၅၀% အခှငျ့အလမျးရှိပါတယျ။
တဈခါတရံကတြော့ မှနျ၊ မှား မဖျောပွထားပါ (doesn’t say)ဆိုပွီး ရှေးစရာသုံးမြိုးပေးထားတတျပါတယျ။ “မဖျောပွထားပါ” ဆိုတဲ့ ရှေးစရာက အမြားအားဖွငျ့ ပိုပွီး ခကျခဲပမေဲ့လညျး ပါဝငျတဲ့ အကွိမျကတော့ နညျးပါတယျ။
Permalink Reply by esther on February 11, 2014 at 13:09